मन्जुले सुरु गरिन् कुखुरा व्यापार ! पहिलो कुखुरा १ हजारमा बेचेर गरिन् उद्घाटन (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/मन्जुले सुरु गरिन् कुखुरा व्यापार ! पहिलो कुखुरा १ हजारमा बेचेर गरिन् उद्घाटन (भिडियो सहित)
मन्जुले सुरु गरिन् कुखुरा व्यापार ! पहिलो कुखुरा १ हजारमा बेचेर गरिन् उद्घाटन (भिडियो सहित)
करिब ५ वर्ष पहिला अन्तर्जातीय बिबाह गरेर जिन्दगि देखि थकित भएकी मन्जु परियारको जिन्दगिमा अहिले खुसियाली छाएको छ । आजकाल कृषि कार्यमा ब्यस्त मन्जु अहिले प्रफुल्लित छिन् । आफ्नै श्रीमानबाट पि’डित भएकी मन्जुले जग्गा भाडा (लिज) मा लिएर कुखुरा व्यापारदेखि साग सब्जी उत्पादन गरिरहेकी छिन् । साथै, त्यसबाट भएको आम्दानीले उनले घर खर्च चलाईरहेकी छिन् ।
केहि समय अगाडी न्याय खोज्दै मिडियामा आएकी मन्जुलाई भेट्न र उनको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जान्न हामी उनि बसेको डेरामा पुग्यौ । केही महिना अगाडी २ महिने सुत्केरी उनकी छोरी मुस्कान अहिले ११ महिनाकी भएकी छिन् । आफुभन्दा १९ बर्ष जेठोसँग बिबाह गरेकी मन्जुको केही समय अगाडी अवस्था निकै नाजुक रहेको थियो ।
आफुलाई खान त पराई जाओस बच्चालाई दुध किन्ने पैसा समेत उनीसँग थिएन । सुत्केरी अवस्थामा श्रीमानले छोडेर गएको बताएकी मन्जुको जीवनमा केही हदसम्म भएपनि दु:ख र पि’डा कम भएको छ। आज हामी उनको डेरामा पुग्दा खुशी देखिएकी मन्जुसँग गरिएको कुराकानी तलको भिडियोमा हेर्नुहोला ।
२ वर्षअघि हिजो २०७४ फाल्गुन २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बंगाल एयरलाइन्सको जहाज दु*र्घटनामा परी मृ*त्यु भएका परिवारलाई विपक्षीका अधिवक्ताले ध*म्की दिएको भन्दै उनीहरुले निस्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । हिजो (मंगलबार) राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ७ वटा मृ*तकका परिवारले विपक्षीका अधिवक्ता देवेन्द्र प्रधानले पत्र लेखी ध*म्की दिएको भन्दै उनीहरुले निस्पक्ष छानबिनको माग गरेका हुन् ।
भारतको संसद बैठकमा मोदीको पार्टीका सांसदले नेपालीमा बोले (भिडियो हेर्नुस्)
आज कुन-कुन देशको भाउ बढ्यो, यस्तो छ २० देशको विनिमयदर